I-OnePlus 7 Pro idlula ukubhukisha kwesigidi ngeentsuku ezintlanu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kule veki inye i-OnePlus 7 Pro yaziswa ngokusemthethweni, isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina. Le fowuni intsha yohlobo lweTshayina yimodeli eyahluke mpela kuleyo siqhele ukuyenza kwinkampani uqobo. Uyilo olutsha, ukongeza kuthotho lokuphuculwa, ngakumbi kwiikhamera zalo. Ke kuye kwakho umtsi omkhulu kumgangatho.
Ifowuni ishiye iimvakalelo ezilungileyo, iimvavanyo zabo zokunyamezela ziyenzile. Ke ngoko, abathengi abaninzi banomdla kule OnePlus 7 Pro, into ebonakalisiweyo kumanani obekiso lwefowuni. Kwiintsuku nje ezintlanu baphula iirekhodi ezininzi.
Sinamanani agciniweyo eTshayina, apho ifowuni ivelisa inzala. Kwiziko lewebhu lenkampani, le OnePlus 7 Pro igcinwe amaxesha angama-220.000, ngelixa kwivenkile eyaziwayo yaseTshayina ekwi-intanethi, ukubhukisha kudlula kude kuma-800.000. Ke ngoko, kwi Ngaphantsi kweentsuku ezintlanu sele kudlule ukubhukisha kwesigidi.
Ngokuqinisekileyo oku kuyenza icace loo nto Kukho ulindelo olukhulu malunga noku. Sele kwintetho yayo bekucacile ukuba yimodeli ebizwa ngokuba ithengise kakuhle. Ke ngoko, inokunceda inkampani ukuba yomeleze indawo yayo ngaphakathi Iimpawu ezithengisa kakhulu kwiziphelo eziphezulu kwihlabathi liphela.
Okwangoku asazi ukuba ukubhukisha kwale OnePlus 7 Pro kuhamba njani eYurophu. Nangona kunjalo izakuba yimpumelelo entsha kwinkampani, ebubonayo ubukho bayo kwilizwekazi bonyuka ngokuhamba kwexesha. Le modeli kufuneka ibe linyathelo elitsha eliya phambili.
Ekuqaleni kukaJuni iya kuthengiswa ngokusemthethweni Le Pro OnePlus 7. Emva koko, sinokubona ukuba ukuthengisa kwayo kuguquka njani kwaye ukuba iba yimpumelelo entsha kwinkampani. Okwangoku, yonke into ibonisa ukuba kuya kuba njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OnePlus 7 Pro iyimpumelelo ekubhukeni
IFirefox Fenix ​​ifikelela kwiVenkile yokudlala kwisigaba sayo sokuvavanya